Xubnaha Aqalka sare ee ku sugan Puntland oo wada-tashiyadoodii ku bilaabay arrinta khilaafka imtixaanaadka – Kalfadhi
Magaaladda Garowe waxaa weli ku sugan xildhibaanada Aqalka sare ee laga soo doorto deegannada Puntland qarkood, kuwaas oo dib u soo noqday khamiistii isla markaasna sheegay in ay doonayaan in ay la tashiyo kala yeeshaan Puntland halku uu dalku u socdo.
Shir jaraa’id oo ay goortaas qabteen ayay ku muujiyeen in dalku gelayo xaalad murugsan oo ay tahay in laga wada tashto. Arrimaha wax laga weydiiyay waxaa ka mid ahayd khilaaf dhinaca qaadista imtixaanaadka la xiriira oo u dhexeeya wasaaradda waxbarashadda federaalka iyo tan Puntland.
Inta badan xildhibaanada Aqalka sare ee soo noqday ayaa la kulmay madaxda wasaaradda waxbarashada Puntland oo ay kala hadleen khilaafkaas, waxay booqdeen qaybta imtixaanaadka wasaaradda oo iyadu hadda isu diyaarinaysa qaadista imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiga sare iyo kan dugsiga dhexe.
Sen. Maxamuud Mashruuc ayaa hore u sheegay in xildhibaanada Aqalka sare ee ka soo jeeda Puntland ay la kulmeen isla markaasna saacado badan ay su’aalo ka weydiiyeen arrinta khilaafkan dhinaca federaalka, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Xildh. Cabdullahi Goodax Bare sidaas oo kalena ay dhinaca Puntland ula kulmeen.
Kulamadii iyo shirarkii siyaasadeed ee ay senetaradu la yeelan lahaayeen xukuumadda iyo baarlamanka ayaan weli hirgelin, sababo la xiriira madaxweynaha oo maqnaa isla markaasna dib u soo noqday sabtidii iyo guddiga joogtada ah ee baarlamanka oo iyaguna hawlo shaqo u jiray Muqdisho.
Kulanka Golaha Shacabka oo goordhaw ku furmay 148 Xildhibaan Kooram ah